Anil Kapoor – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
AK vs AK (2020) Unicode ဒီဇာတ်ကားကတော့ IMDb rating 7.2 ရရှိထားတဲ့ Drama/Thriller အမျိုးအစား Bollywood ဇာတ်ကား တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။တကယ့်နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့Anil Kapoor ,Anurag Kashyap,Sonam Kapoorအဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်…. ဇာတ်လမ်းအညွှန်း အနူရား(ဂ်)ဆိုတာ တက်သစ်စ ဒါရိုက်တာလေး… သူဟာ ဇာတ်ညွှန်းကောင်းကောင်းရှိလို့ နာမည်ကြီး မင်းသား အနေး(လ်)ကို သူ့ရဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကား မှာ သ‌ရုပ်ဆောင်ပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်… မင်းသားက ဒါရိုက်တာပေါက်စဆိုတော့ ငြင်းလိုက်တယ်…. မင်းသားရဲ့အငြင်းတစ်ချက်က ဘာမဟုတ်ပေမဲ့ အနူရားလို ဒါရိုက်တာပေါက်စအဖို့ အတော်ဆုံးရှုံးမှုတွေများပါတယ်…ဒီလိုနဲ့အချိန်(၁၅)နှစ်ခန့်ကြာတော့ ပြောင်းလဲမှုတွေအတော်ကြီးလာတယ်.. အနူရားဟာ နာမည်ကြီးဒါရိုက်တာဖြစ်လာသလို အနေးလည်းအသက်အရွယ်ကြောင့် အဘိုးတွေ ဉီးလေးတွေနေရာမှာပဲ သရုပ်ဆောင်ရင်း အကျဘက်ကိုရောက်နေတယ်… ဒီလိုနဲ့ ဒါရိုက်တာနဲ့မင်းသားကိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် TVအစီအစဉ်တစ်ခုကနေ Liveလွှင့်ရင်း အင်တာဗျူးဖြစ်ကြတယ်..သူတို့(၂)ယောက်ပြန်ဆုံတဲ့အချိန်မှာ ဟိုးတစ်ချိန်က သူ့ကိုအကျနာအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့မင်းသားအပေါ် ဒါရိုက်တာရဲ့ ဒေါသတွေဟာ ပုံကျလာတယ်… တစ်နိုင်ငံလုံးဝိုင်းကြည့်နေတဲ့ TVအစီအစဉ်မှာ မင်းသားကို မျက်နှာရေနဲ့ပက်ခဲ့တယ်… အိန္ဒိယရဲ့ ရုပ်သံတွေ သတင်းစားတွေ ဂျာနယ်တွေဟာ ဒါရိုက်တာရဲ့ ရိုင်းစိုင်းကြမ်းတမ်းမှုတွေကို မျက်နှာဖုံးကြီးတပ်ပြီး ဆော်ကြပါတယ်…အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ပြဿနာမျိုးစုံတက်ပါတော့တယ်…ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့… ခံစားကြည့်ကြပါဦး Credit Review ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Khaing Zar Thwe ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ IMDb rating 7.2 ...
IMDB: 7.0/10 10627 votes